टुरिजमको संस्थापक शेयर २९ गतेदेखि लिलाम बिक्री हुंदै
काठमाडौं । टुरिजम डेभलपमेण्ट बैङकले ८२ हजार ५ सय २३ दशमलव ८० कित्ता संस्थापक समूहको हकप्रद शेयर लिलाम बढाबढ गरि असार २९ गतेदेखि बिक्री गर्ने भएको छ । शिलबन्दी बोलपत्र पेश गर्ने अन्तिम मिति साउन ५ गते...
एन आई सी एशिया बैंकको नयाँ शाखा कालिकोटमा
काठमाडौं, २२ असार । एन आई सी एशिया बैंकको नयाँ शाखा खडाचक्र नगरपालिका, वार्ड नं. १, मान्मा, कालिकोटमा आज एक समारोहका बिच खडाचक्र नगरपालिकाका मेयर जसि पाण्डे तथा कालिकोट उद्योग बाणिज्य संघका अध्यक्ष सु...
सेयर किन्नेले दुई दिनमै ,बेच्नेको यस्तो हालत …?
काठमाडौ। दोस्रो बजारका शेयर खरीद गर्नेले किनेको दुई दिनभित्र ब्रोकरलाई पुरै पैसा बुझाइसक्नु पर्छ। केन्द्रीय निक्षेप प्रणाली ९सीडीएससी० ले आफ्ना निक्षेप सदस्यहरुलाई पैसा भुक्तानी लिन निर्देशन दिएको...
देवको विशेष साधारण सभा
काठमाडौं । देवः विकास बैङ्क लिमिटेडको विशेष साधारण सभा असार २९ गते लैनचौर बैङ्क्वेट्स काठमाडौंमा हुदैँछ । सभाको विशेष प्रस्तावमा देव विकास बैङ्कले युनियन फाइनान्सलाई प्राप्ती गर्ने र प्राप्ती पश्चा...
एभरेष्टको एक अर्ब ५० करोड भन्दा बढीको हकप्रद सेयर आजबाट
काठमाडौं, १८ असार । एभरेष्ट बैैंकले आज आईतबारबाट एक अर्ब ५० करोड ८८ लाख ८८ हजार रुपैयाँ बराबरको हकप्रद सेयरको बिक्री कार्य सुरु गरेको छ । बैंकले हाल कायम रहेको चुक्ता पुंजी चार अर्ब ५२ करोड ६४ लाख ...
सहकारी संस्थाबाट नगद चोरी
काठमाडौं, १४ असार । शंकरापुर नगरपालिका–६ स्थित मेरिडियन बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाबाट ६ लाख २६ हजार ३ सय २० रुपैयाँ चोरी भएको छ । मंगलबार बिहान संस्थाका कोषाध्यक्ष सोही ठाउँ बस्ने जगन्नाथ श्रेष्ठले स...
फर्स्ट माइक्रोफाइनान्सको सिईओ पन्थी
काठमाडौं । फर्स्ट माइक्रोफाइनान्स डेभलपमेण्ट बैङ्क लिमिटेडले प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा भेस राज पन्थीलाई ३ वर्षको लागि कार्यकाल अवधि थप गरेको छ । बैङ्कको असार १२ गते बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले उनला...
नेप्से फेरि पनि ऋणात्मक, झण्डै तीन अंकले बजार घट्दा ६१ करोड ९१ लाखको कारोवार (तालिका–सहित)
काठमाडौं, १३ असार । अघिल्लो दिन धनात्मक देखिएको नेप्से साताको तेस्रो दिन मंगलबार फेरि ऋणात्मक देखिएको छ । आज नेप्से दुुई दसमलव ६३ अंकले घटेर १५ सय ६५ दसमलव नौ अंंकमा कायम रहेको छ । नेप्से सेन्सिटिभ...